Iyo inogara iri inoshanda skrini yeiyo iPhone 13 ichave iyo kumusoro yako sleeve | IPhone nhau
Iyo inogara iri-pachiratidziro cheiyo iPhone 13 ichave iyo yeke kumusoro kwayo ruoko
Kuziviswa kweiyo iPhone 13 kuri kuswedera padyo uye padyo, uye kunyangwe paine zvimwe zvakakosha nyaya chimwe chinhu chakataurwa zvishoma senge chinogara chiri-pachiratidziri chinogona kunge chiri chako chakanakisa.
Iyo nguva yatinozoona iyo iPhone 13 iri kuswedera, pamwe uno mwedzi uno waGunyana, mwedzi miviri chete kubva nhasi. Zvakawanda zvataurwa pamusoro pazvo zvitsva, senge akanakisa mukamera, gara uchigamuchirwa, uye yayo nyowani Yechokwadi Motion skrini ine 120Hz, senge iyo iyo Pro Pro yatove nayo kwezvizvarwa zvakati wandei. Nekudaro, pane chimwe chinhu nezve izvo zvishoma zvataurwa: iyo inogara iri-pachiratidziri. Anga ari Mark Gurman akaunza chinhu chitsva kumberi, kunyangwe hazvo paine runyerekupe nezve basa iri kwezvizvarwa zvakati, uye chimwe chinhu chinoratidzika kunge chisina kukosha chingangoreva shanduko huru muiyo iPhone.
Iyo Apple Watch ndiyo yekutanga Apple chishandiso kuve neyakagara-iri pachiratidziri, "Nguva Dzose Inotaridza", kubva paChikamu 5. Ndakasvetuka chizvarwa icho cheApple Watch, asi ndakadonha neChikamu 6, icho chinosanganisira kuita uku. Vamwe vashandisi vanozvimisa nekuti zvinoreva bhatiri rakanyanya kunwa, asi chokwadi ndechekuti kana uchinge wajaira, zvinonetsa kusiya izvo zvaunokupa. Hongu, bhatiri rinokurumidza kupera, asi Apple yaita mashandiro aya nenzira yekuti kukanganisa kwacho kuve kwakaderera sezvinobvira, uye zvakatonyanya kushoma kana iwe ukashandisa mabara mune iro dema iro rakanyanya kuratidza, sezvo ese matema mativi e chidzitiro ivo vanenge vadzima. Iyo tekinoroji inotarisirwa kunge yakafanana paiyo iPhone 13.
Pane wachi inokutendera kuti iwe uone iyo nguva usina kutenderedza ruoko, asi pa iPhone kushanda uku kunogona kuenda zvakanyanya, uye kana Apple ikachiwedzera kune iyo nyowani iPhone modhi, inofanira kutora mukana izere nazvo. Izvi zvinorevei? Pangave pasina chikonzero mune inogara iri-pane yekuvharira skrini mune izvo zvese zvatinoona inguva, zvinova zvinoitika panguva ino kana iyo skrini ichiitwa. Kana isu ikozvino tave nechiratidziri chinogara chiripo, chichava kugona kuona rumwe ruzivo, senge huwandu hwezviziviso zvatiinazvo, uye wadii mamiriro ekunze munzvimbo medu, kana musangano unouya wekhalenda. Ndokunge, kana iyo inogara-iri pachiratidziro ikasvika, inofanirwa kusvika neshanduko dhizaini yekiyi skrini, uye icho chinhu chatave takamirira kwenguva yakareba.
Isu tatoziva iOS 15, asi Apple inogara iine ace kumusoro neayo nyowani smartphone, uye ndine chokwadi chekuti tichaona nhau dzeIOS 15 dzatisina kuratidzwa mune yekupedzisira Keynote mharidzo nekuti isu tinofanirwa kumirira iyo iPhone 15 inoburitswa, sezvo ichave ega shanduko yeiyi smartphone. Kune avo vedu vanozoshandukira kune itsva iPhone modhi, idzi inhau dzakanaka, kwete zvakanyanya kune avo vanoronga kugara nemhando yavo yazvino.. Uye kana iyo inogara iri-skrini ichisanganisirwa muiyo iPhone 13, isu tinofanirwa kumirira imwe nyowani yekuvhara skrini, pakupedzisira
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 13 » Iyo inogara iri-pachiratidziro cheiyo iPhone 13 ichave iyo yeke kumusoro kwayo ruoko
WhatsApp yatotibvumidza kujoina vhidhiyo kufona chero nguva
Maitiro ekugadzirisa nzira dzekuwanika dzekushandisa muIOS 15